ခြာတိတျမလေး – ရသစုံ
ဆုံးမတတျသူကို တနျဖိုးထားပါ ဆုံးမတတျသူကို တနျဖိုးထားပါ လောကမှာ မငျးကို ပွုံးပွတတျသူထကျ ဆုံးမတတျသူက အလှနျနညျးပါလိမျ့မယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတျောတျောမြားမြားက
ဆုံးမတတျသူကို တနျဖိုးထားပါ လောကမှာ မငျးကို ပွုံးပွတတျသူထကျ ဆုံးမတတျသူက အလှနျနညျးပါလိမျ့မယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတျောတျောမြားမြားက အမိုကျခံပွီး လူတဈယောကျကို ဆုံးမသှနျသငျဖို့ ဝနျလေးတတျကွတယျ လူတဈခြို့ကတော့ ဆုံးမသှနျသငျတာကို မကွိုကျကွဘူးလေ။ လူဆိုတာ အမှားမကငျးသလို ပွီးပွညျ့စုံတဲ့လူဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ ကိုယျ့ရဲ့လိုအပျခကျြတှကေို စတေနာသနျ့သနျု့ဖွငျ့ ထောကျပွသှနျသငျတတျသူက တဈရာမှာ တဈယောကျလောကျပဲရှိနပေါလိမျ့မယျ။ ပွုံးပွတယျဆိုတာက ရငျထဲက ပါခငျြမှ
တပေါင်းလ အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ တပေါင်းလဆန်း(၁)ရက်နေ့(23.2.2020)မှ တပေါင်းလကွယ်နေ့(23.3.2020)အထိ တစ်လတာလုံး မြတ်စွာဘုရားရှင်အား အုန်းထန်းလျက် ကပ်လှူရမည်။ ဘုရား ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ဂါထာအား ပုတီးစိပ်ရမည်။ တပေါင်းလ တစ်လတာအတွင်း ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာရပါလို၏။မိမိလိုရာဆုတောင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်နေ့နံသားမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း။ ဤယတြာအစီအရင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်ထိရောက် သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်မည်ဆိုပါက စီးပွားလာဘ်လာဘပွင့်လန်းပြီးမည်သည့်အခက်အခဲများ မဆို ကောင်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေသား။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ့်တိုင်နာကျင် နေရပြီဆိုရင် သူ့ကိုစွန့်လွတ်ဖို့ လုံးဝတွေဝေမနေပါနဲ့ အကယ်၍သာ ဘဝမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ့်တိုင်နာကျင် နေရပြီဆိုရင် သူ့ကိုစွန့်လွတ်ဖို့ လုံးဝတွေဝေမနေပါနဲ့ …… တစ်ချို့ သောစွန့်လွှတ်မှုတွေက ခဏတာထိခိုက်ပေမယ့်တစ်ဘဝလုံးစာ ကိုယ့်အတွက် သောကတွေ ကင်းစေမှာပါ။ ဘဝမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ်မျက်ရည်တွေ ကျနေရပြီဆိုရင် မျက်ရည်တွေသုတ်ရုံလောက်နဲ့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ …… သူ့ကိုပါ အပြီးတိုင်မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ
“လူသိနည်းတဲ့ အစွန်း ဟူသမျှ ချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ” သင် အရမ်းကြိုက်တဲ့ အဝတ်အစား တစ်ခုခုမှာ အရောင်တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုခု စွန်းပေသွားတဲ့အခါ နှမြောတသ ဖြစ်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ စွန်းသွားတဲ့ အရာအလိုက် ချွတ်နည်း အမျိုးမျိုး ရှိနေလို့ပါ။ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁. နှုတ်ခမ်းနီ ပေသွားခဲ့ရင်
ဆွမ်းတော် ကပ်ရာတွင် သတိမထားလိုက်မိတဲ့ အလွဲလေးများ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအများရဲ့ အလွဲတွေထဲက နောက်ထပ်အလွဲတစ်ခုက ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးပါ။ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူတာကို ပြောတာပါ။ နတ်တင်သလိုမျိုး ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွမ်းတော်ကပ်တာ ဆိုတဲ့အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို ရည်ရွယ်အာရုံပြုပြီး ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက ဘာမှ မပြောဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သလိုလေး တင်သွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် ချမ်းသာချင်ရင် အသက် ၂၀ ကျော်မှာ ဒါတွေ လုပ်ပါ လူတိုင်းဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများဟာ ဒီအိပ်မက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ကြပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာ တစ်နေ့နေ့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်နဲ့ မရပဲ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှ ရတဲ့အရာဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဒီအိပ်မက်ကိုလက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လေလေ သူဌေးဖြစ်စောလေလေပါပဲ။ ဒါကြောင့်
ငါးသေတ္တာနဲ့ ထောင်းတဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း လုပ်နည်
ငါးသေတ္တာနဲ့ ထောင်းတဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း လုပ်နည်း ငါးသေတ္တာနဲ့ ထောင်းတဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း သင် စားဘူးပါသလား? ဟိုရက်က ယိုးဒယားရောက်တော့ ယိုးဒယားကနေ ၂ နာရီလောက်သွားရတဲ့မြို့မှာ စားခဲ့ရတာလေး မြန်မာပါးစပ်နဲ့ အကိုက်ဘဲမို့ … ခုတော့အိမ်ရောက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းပြန်ထောင်းပြီး မိသားစုကို လုပ်ကျွေးတာ ကြိုက်မှကြိုက်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း ငါးသေတ္တာသေး ၁ ဗူး ငရုပ်သီးလှော်
မိမိတို့လက်ဖဝါးမှာ X သင်္ကေတ ပါနေသူလေးများ သိထားသင့်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် သင်ဟာ လက္ခဏာဗေဒင်ကို ဝါဿနာပါသူလား။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို သိရမယ်ဆိုရင် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ တစ်ချို့ဟောချက်တွေက မှန်တာတွေလည်းရှိသလို ၊ အချို့ဖြစ်မလာတဲ့ ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ယုံကြည်သူဖြစ်စေ ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ ဒီလို လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ သိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
လူသိနည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ဆောက်နည်းများ သိသူတောင်နည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ဆောက်နည်းများ နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် (တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့သိမ်းထားခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီ။) ဆရာကြီးဒဂုန် ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း တွေ့မိလို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ထဲက အိမ်ဆောက်ရင် လိုအပ်ချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်ဆရာ ပါ။သူရေးခဲ့တဲ့ စာစုကို ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဝေဒင်္ဂတို့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ စား-၀တ်-နေ-ရေး ကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။အဲဒီ စား-၀တ်-နေ-ရေး ဆိုတဲ့ စကားလေး သုံးခွန်းဟာ
ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းစေဖို့ ပေါင်းတင်နည်း ၂ သွယ်
ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းစေဖို့ ပေါင်းတင်နည်း ၂ သွယ် သဘာဝအတိုင်း ဆံပင်ဖြောင့်စင်းစင်းလေးကို မကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ဘယ်မှာရှိမှာလဲ။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ ဆံပင်ဖြောင့်တာ ခေတ်စားတာပေါ့နော်။ ဆံပင်ဖြောင့်ဖို့အတွက် ဓါတုပစ္စည်တွေသုံးတာဟာ ဆံသားပျက်ဆီးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း ငှက်ပျောသီးမှည့် ၂ လုံး ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂